★မြန်မာ့အလင်း★: ကုလားချစ်တဲ့ Allahက February3မှာ မွတ်ဆလင် 25ကောင် ခွေးလိုဝက်လိုသတ်ပြီး 115 ကောင် မသေမရှင်လုပ်
ကုလားချစ်တဲ့ Allahက February3မှာ မွတ်ဆလင် 25ကောင် ခွေးလိုဝက်လိုသတ်ပြီး 115 ကောင် မသေမရှင်လုပ်
သတ်တာနဲ့သေတာ မွတ်ဆလင်တွေအတွက် နေ့စဉ်အလုပ်ပါ။ လမ်းဘေးမှာ ပိုးဆိုးပက်စက်နဲ့ ခွေးတွေလို ၀က်တွေလိုသေပြီး ဘ၀နိဂုံးချုပ်ရတာလဲ မွတ်ဆလင်ပါပဲ။ သူတို့အယူဝါဒအရ ဖြစ်ခြင်း …ပျက်ခြင်း …သေခြင်း . . သတ်ခြင်းဟာ Allah ၏ ဆန္ဒအရဖြစ်နေတာဆိုပဲ။ ကုလားတွေက မွတ်ဆလင်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူပြီး Allahကို သိပ်ချစ်ပါတယ်။ သူတို့ သိပ်ချစ်တဲ့ Allah ဟာ မွတ်ဆလင်တွေကို အသေဆိုးနဲ့ သေခိုင်းတဲ့ သတင်းကိုဖတ်ရင်း ကြည်နူးစိတ်နဲ့ .. . ဟားတိုက်ကြပါကုန်
KARBALA: At least 25 people were killed and more than 100 injured Wednesday in the latest deadly bombings to target Shia Muslim pilgrims flocking to the southern Iraqi city of Karbala.
A man drivingamotorbike inacrowd of pilgrims detonated the explosives strapped to his body, killing at least 25 people and injuring 115, police told DPA.
In the southern Baghdad neighbourhood of al-Amal,asmaller bomb injured three people nearaShia mosque, police told the Aswat al-Iraq news agency. The victims had been preparing for the pilgrimage to Karbala.
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 8:17 AM